Wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay sharci saameynaya ganacsatada
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada oo lagu ansixiyay Sharciga Jaan-goynta iyo Tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Golaha ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay sharcigaan oo ay usoo gudbisay wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga xukuumada federaalka ah.
Sharciga Jaan-goynta iyo Tayo-dhowrka Soomaaliyeed oo laga soo aruuriyay sharciyadii iyo xeerarkii dalka ee tayo-dhowrka dalka, horumarinna lagu sameeyay ayaa la gaarsiiyay habka caalamiga ah ee tayo-dhawrka.
Ujeedada sharciga ayaa ah in horumarin lagu sameeyo siyaasadda Jaan-goynta iyo tayo-dhowrka qaranka, in la dhowro xeer nidaaminta tayada lagu maamulo tayada badeecada iyo adeegyada, in uu ilaaliyo bad-qabka bulshada iyo in lagu dhiso hay’adda tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Meel-marinta xeerkaan ayaa kusoo aadaya iyada oo qaybo kamida wadanka ay soo galaan badeecado aan tayo lahayn, kuwaasi oo laga keeno dibada gaar ahaan dalalka dariska.
Madaxweyaha Dowlada Federaalka Soomaaliya oo casumaad u fideyey madaxda maamul goboleedyada habeenkii.....
Caasimada Soomaaliya oo si weyn looga dabaaldegay Ciidul Adxaa
Soomaliya 11.08.2019. 11:54
Cadowga Soomaaliya ee aysan isku mowqif ka hayn Farmaajo iyo Khayre
Soomaliya 25.04.2019. 06:04
Shuruudaha ku harsan Soomaaliya si looga cafiyo deynta 5-ta bilyan ah
Soomaliya 17.04.2019. 14:08
Nuxurka khudbadii Khayre ee furitaanka kalfadhiga Aqalka Sare
War Saxaafaded 01.04.2019. 17:49
Daacish oo war ay kasoo saartay xaalka US kusoo qaadey Soomaaliya 02.06.2020. 23:00
Zimbabwe oo carro ka muujisay hadalo kasoo yeeray Mareykanka 02.06.2020. 19:55
Qiimeyn la xiriirta Covid-19 lagana sameeyay Soomaaliya oo la shaaciyey 02.06.2020. 17:30
"Kala aragti duwanaantii" Deni iyo Karaash oo lagu guuleystay in la xaliyo 02.06.2020. 15:40
In ka badan shan kun oo qof oo lagu xiray guud ahaan Mareykanka 02.06.2020. 15:00
Cudurka Ebola oo soo laba kacleeyay iyo digniin culus oo laga soo saarey 02.06.2020. 14:28